“Super Rugby 2017” : lasan’ny Crusaders ny amboara | NewsMada
Mirongatra indray ny aretina any Antsiranana: mpianatry ny oniversite maro voan’ny Covid 19
Covid-19: Flambée des cas positifs dans la région Diana
“Super Rugby 2017” : lasan’ny Crusaders ny amboara
Par Taratra sur 08/08/2017
Norombahin’ny ekipan’ny Les Crusaders, avy any Nouvelle-Zelande, fanimbalony, ny amboaran’ny “Super rugby 2017”. Lavon’izy ireo, tamin’ny isa 25 no ho 17, ny Lions Afrika Atsimo, ny asabotsy lasa teo tao amin’ny kianjan’i Johannesbourg.
Tsiahivina fa nilalao 14 ry zareo Afrikanina Tatsimo, teo amin’ny minitra faha-39, rehefa nahazo karatra mena i Kwagga Smith, taorian’ny fahadisoana nataony tamin’i David Havili.
Azo lazaina fa nanjakan-dry zareo New-Zelande tanteraka ny fihaonana satria efa nitarika tamin’ny isa 12 no ho 0 ry zareo raha vao nanomboka 12 mn ny lalao. Avy eo, lasa 25 no ho 3. Samy nahatonga baolina nentin-tanana avokoa, tamin’io, ry Tamanivalu sy ry Kieran Read, izay samy voatsaran’i Richie Mo’unga avokoa.
Marihina fa mpilalao fito ao amin’ity Les Crusaders ity no manatevina ny All Blacks, toa an’i Matt Todd sy i Sam Whitelock.
Indroa izany izao no very teo amin’ny famaranana ny Afrikanina Tatsimo, teo amin’ity fihaonana ity. Niverina eo am-pelatanan’ny Crusaders indray ny anaram-boninahitra, taorian’ny taona 2008, nahazoany izany farany.
Valanaretina Covid19: nampidina ny tahan’ny fanaovam-baksiny 04/12/2020
Fahasalamana: mirongatra indray ny gripa 04/12/2020
Hasomparana: nisy nangalatra ny fantsona 12 m teny Amoronakona 04/12/2020
Vaovao tambatra 04/12/2020
PSM: volavolaina ny drafi-panajariana ho an’ny fari-dranomasina 04/12/2020